Ihe kpatara ị ga - eji chebe weebụsaịtị gị na SSL Asambodo si Semalt
Na-eche ụzọ niile ị ga - esi bulie uru SEO nke weebụsaịtị gị? Agbanyeghị na anyị ji n'aka na ị ga - ejideworị mkpụrụ osisi niile na - adịghị ala ala, ọ nwere otu ihe na - adọpụkarị uche. Nke ahụ bụkwa izo ya ezo na ebe nrụọrụ weebụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ntinye nke akwụkwọ SSL na weebụsaịtị gị nke na-akwalite njikọ echekwara, nke ezoro ezoro n'etiti ndị ọrụ gị na data ha. Na Semalt, ị nwere ike ijide n'aka na nkwukọrịta niile na ebe nrụọrụ weebụ gị zoro ezo ma nwee nchebe. A na-eji asambodo SSL ndị anyị na-akwụ ụgwọ dị ukwuu gafee weebụsaịtị nke na-eme ka ha nwekwuo nchebe, enyi na enyi Google na nke ewu ewu.
Inwe nzuzo HTTPS siri ike nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji were ọkwa SEO nke weebụsaịtị gị dị ka ọkwa dị elu n'anya njirisi ọchụchọ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-ekwu maka ịkwụ ụgwọ (dịka: ịzụ ahịa).
Ka anyị leba anya n’ihe kpatara SSL ji bụrụ ihe dị mkpa na SEO na 2020 na karịa.
Gịnị bụ SSL Asambodo?
Tupu anyị abanye na nkọwapụta ahụ, ka anyị buru ụzọ ghọta ihe akwụkwọ SSL bụ. Ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ na weebụsaịtị, ajụjụ dị mkpa ga-abụ: gịnị bụ izo ya ezo na weebụsaịtị? Ma ọ bụ, gịnị ka HTTPS pụtara?
Azịza ya dị mfe. SSL, nke na-anọchi anya Secure Sockets Layer, bụ usoro nchekwa intaneti na-enye ohere izo ya ezo, nkwenye, na iguzosi ike n'ezi ihe data na weebụsaịtị ọhụụ. Ọ na - agbanwe usoro nnyefe hypertext oge niile (HTTP) ka ọ bụrụ nke echekwabara (HTTPS), na-enye nchebe gị data na ntụkwasị obi nye ndị ọrụ gị. Ozi ọ bụla na-aga na sava weebụ gị nwere ezoro ezo ka ọ ghara izuru ma ọ bụ kwagide ya n'oge mgbasa.
Enwere ike itinye SSL na weebụsaịtị webụsaịtị akwụkwọ dị ka asambodo (nke jikọtara nke koodu) nke onye na-eweta dị ka Semalt mepụtara. Akwụkwọ SSL a na-ekpuchi data niile na-abanye ma na-apụ na weebụsaịtị gị. Ọ na - eme nke a tumadi site n'omume atọ:
Na-ezochi data niile
Ibido usoro nkwenye n'etiti ngwaọrụ (kọmpụta gị na ihe nkesa ahụ) iji gosi na ngwaọrụ ndị a bụ ihe ha na-ekwu na ọ bụ
Tinye akara na ntinye aka na njirimara dị mma na nsọtụ abụọ a.
Na nchekwa ntanetị, usoro ọrụ maka SSL bụ TLS, nke na-anọchi anya Transport Layer Security. Ọ bụ onye ga-anọchi ya bụ usoro mbụ nke SSL 3.0 bidoro na 1996. Taa, a maara ya nke ọma dị ka izo ya ezo SSL / TSL. Ọ masịrị Google ịkpọ ya HTTP n’elu TLS ma ọ bụ naanị HTTPS.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe onye ọrụ bịara na weebụsaịtị gị wee banye ozi kaadị akwụmụgwọ ha na peeji ndenye ọpụpụ, ekwesịrị ịdebe data ahụ nke ọma. Site na akwụkwọ SSL, ị nwere ike ijide n'aka na ọ dị. Nke a na-echekwa ozi onwe onye dị oke mkpa nke onye ọrụ gị yana ọrụ yana ntanetị gị. Ime ka ndị ọrụ gị laghachite azụ na oge ọzọ.
Akwụkwọ SSL a bụkwa ihe na-enye akara ngosi mkpọchi akwụkwọ ndụ na mbido URL na Google Chrome na Mozilla Firefox. Site na mmalite anyị, Semalt enyerela ọtụtụ narị ndị ahịa n'ofe ụwa aka. Ndị ahịa anyị niile dabere na otu atụmatụ SSL akwụkwọ atọ anyị na-enye. Ihe ngwugwu a di (ya n’adikwa n’okpuru subdomains) n’ezie bu onye ahia anyi kachasi nma n’onyinye inweta asambodo SSL / TSL.
Ọ na - enyere anyị aka na ndị ọrụ Semalt mara ọtụtụ asụsụ dị ka Bekee, French, Russian, Ukraine, Italian, Turkish n'etiti ndị ọzọ. Nke a na - enyere aka na nkwukọrịta ka mma ma na - enyere anyị aka ịnye ndị ọrụ anyị ọrụ kacha mma.
Ọgụgụ 1 - akara echedoro na Google Chrome
Ugbu a ị nwere echiche ziri ezi banyere ihe nzuzo nwere ike ịme maka weebụsaịtị gị na ndị ọbịa weebụ, ka anyị lelee ya site n'akụkụ SEO.
Kedu ihe kpatara SSL Asambodo dị Mkpa maka SEO Weebụsaịtị gị?
Na Semalt, ịbụ onye na-eweta ọrụ SEO dị elu na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahịa dijitalụ zuru oke, anyị nwere nkwanye ùgwù dị elu maka ngwaahịa nchekwa. Anyị onyinye SSL akwụkwọ bụ otu n'ime ha, nke nwere ike inyere gị aka ịkwalite SEO nke weebụsaịtị gị.
Anyị amụtaworị otú ọnụnọ nke akwụkwọ SSL / TSL na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike isi bụrụ ihe na-agwụ ike maka gị. Ọ bụghị naanị chebe weebụsaịtị gị ka ọ bụrụ nchekwa dị nchebe mana ọ ga - echebekwa ozi nke ndị ọrụ gị. Mana karịa nke ahụ, ọ ga - enyere aka na mbọ nchọta ọchụchọ gị (SEO). Ka anyị chọpụta.
Google na-agba ume HTTPS
N'afọ 2014, Google kwupụtara na ọ ga-amalite ịtụle 'njikọ echekwara, njikọ chiri anya dị ka ihe mgbaàmà na ogo ọchụchọ ya algorithms'. Ihe karịrị afọ isii kemgbe ahụ, Google amụbawo ịdị arọ ya na izo ya SSL / TSL nke ukwuu nke na taa ọ na-emetụta ọtụtụ ajụjụ ọchụchọ, na karịsịa ndị na-adabere na azụmahịa ego. Ebe ntanetị, ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, na ntanetị mmekọrịta bụ ihe atụ nke ụdị weebụsaịtị achọrọ izo ya ezo. Nke a bụ n'ihi na ha na-emeso ozi nkeonwe nke onye ọrụ dịka nkọwa kaadị akwụmụgwọ, nọmba nchekwa ọha, na nkọwa njirimara nkeonwe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere azụmaahịa nke gị, SSL kwesịrị ịdị n'elu ndepụta nyocha SEO gị.
Ngwa nchọta ndị ọzọ dị ka Bing na Yandex amalitela iji izo ezo websait dị ka ọkọlọtọ ọkọlọtọ nke ọnọdụ ka mma.
Dabere na Nkwupụta Ngosipụta Google , 88% nke websaịtị zuru ezu na Google Chrome gburugburu ụwa (site na Windows desktọọpụ) na Eprel 2020 ka enwere HTTPS. Nke ahụ bụ ọnụọgụ buru ibu n'ihi na Chrome ka nwere oke ahịa (na kacha) ahịa ahịa n'etiti ihe nchọgharị weebụ.
Ọgụgụ 2 - Pasent nke ibe ndị eburularị HTTPS na Chrome
Otu akụkọ ahụ na-enye echiche na ngwaọrụ mkpanaka na-ekwu maka ọnụọgụ nke okporo ụzọ ndị ọrụ ejighị n'aka. Nke a na - egosi na enwere ohere maka ndozi maka weebụsaịtị ndị gbara anyị gburugburu. Ndi fo edi kiet ke otu mmọ?
N'akụkụ ahụ, lee ụfọdụ ihe sitere na Google n'ihe kpatara HTTPS ji dị mkpa:
Ọ na - echebe ihe ndị na - ezoghị ezo na ndị na - achọ ihe
Na-egbochi mwakpo cyber
Ọ na - eme ka data kwụsị ịdị
Arụ ọrụ dịka sistemụ nchekwa naanị mgbe ngwanrọ na nchekwa ngwaike nwere ike ọgaghị ezu
Ebe nrụọrụ weebụ nwere SSL / TSL izo ya ezo na-egosiputa inyocha ọchụchọ na ọ na-eji ozi onye ọrụ na iguzosi ike n'ezi ihe data. Tinyere ihe ndị ọzọ dị ka ọdịnaya dị mkpa, ọdịnaya silo, njikọ dị n'ime, na azụlinks nwere ikike dị elu, izo ya ezo abụrụla ihe dị mkpa maka nkwalite SEO.
Dịka ị maraworị, SEO bụ ihe niile gbasara imezi hụ ọhụụ nke weebụsaịtị gị na nyocha organic. Site na izo ya ezo dika ihe di nkpa, inwere ike iwunye asambodo SSL maka obere ego ma guzo na igwe mmadu nke weebụsaịtị, nke na-adighi HTTPS.
Kedụ ka HTTPS ga-esi meziwanye SEO?
Ọ bụrụ na ị bụ ahịa ahịa ịntanetị, ị maralarị na ọ dịghị ihe ọ bụla na-enwe mmetụta ozugbo na SEO. Nwere ike bulite ọdịnaya weebụ gị niile ma gosipụta ibe ọ bụla na isiokwu dị mkpa. Nchọpụta a ka ga-ewe oge iji tụlee aha, cache, ma cheta ibe weebụ gị maka ọkwa ndị ka mma.
A maara na ọ nweghị ihe ga - eme ka ọ bụrụ nwebisiinka SEO n'otu ntabi anya. Otu a ka o siri mee ka HTTPS rụọ ọrụ na weebụsaịtị gị. Ikwesighi ichere na ebe nrụọrụ weebụ gị ga-enwe ezigbo nguzo na nsonaazụ nchọta ihe nchọta (SERP) naanị site na ịwụnye akwụkwọ SSL / TSL. Mgbe otutu omume gi zukọrọ n’otu oge, ị ga - amalite ị nweta uru ha.
Ọgụgụ 3 - Nke a bụ etu weebụsaịtị nke na-abụghị HTTPS si ele onye ọrụ anya
Ezigbo ihe nlere nke ga - enye gị nghọta doro anya bụ nke a: chee na TSL saịtị ezoro ezo nke Semalt na weebụsaịtị nke ezoghị ezo nke ụlọ ọrụ asọmpi ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ isiokwu ahịa dijitalụ dị mkpa, yana weebụsaịtị abụọ a na-asọ mpi maka ọkwá dị elu, saịtị Semalt ga-enwe ọkwa dị elu. N'ihi gịnị?
N'ihi na Semalt ọ bụghị naanị nwere ọdịnaya, ọdịnaya dị mkpa banyere isiokwu ahụ ị na-achọ kamakwa etinye SSL akwụkwọ arụnyere. N'ụzọ, ọ bụ naanị otu n'ime ihe ndị inyocha nchọta ga-eji tụlee nsonaazụ dị iche iche maka ajụjụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdọrọ nkwụsị niile na ịkwaga ebe nrụọrụ weebụ gị n'elu nyocha nke organic, ịwụnye akwụkwọ SSL / TSL bụ otu n'ime omume kachasị mfe. Naanị ihe ọ ga-ewe bụ ka ị zụta asambodo dabere n’ihe ịchọrọ, ọ dịkwa mma ịga.
Etu esi etinye Asambodo SSL na Semalt?
Na Semalt, ịwụnye akwụkwọ SSL na weebụsaịtị gị dị mfe dịka ịzụ ahịa n'ịntanetị. Can nwere ike ịga na ibe asambodo SSL anyị wee họrọ otu n'ime atụmatụ atọ ahụ. Ha bụ:
Nduru - Naanị ntinye, enweghị asambodo
Ọkọlọtọ - SSL dị mma sitere na Comodo gbakwunyere nrụnye
Adịchaghị aka - Kachasị mma SSL Wildcard na-ere maka ntinye na nrụnye
Dịka e kwuru n’elu, atụmatụ adịchaghị mma anyị bụ n’etiti ndị ahịa anyị dị adị. Ọ na-enye ha nrụpụta enweghị nsogbu ka ha nwee ike lekwasị anya n'ihe ndị ka mkpa dị ka ọdịnaya weebụ yana njikwa onye ọrụ.
Ozugbo ịhọrọ atụmatụ dabara adaba, mee ịzụta ahụ site na ụzọ mbata ịkwụ ụgwọ na-enweghị nchebe. Ozugbo ịzụrụ ya, ị nwere ike itinye mkpokọta weebụ gị na ọrụ anyị n'ụzọ dị mfe ma mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị nwee nchebe. A sị na inwee nsogbu ọ bụla n’oge usoro ntọlite, nlekọta ndị ahịa anyị ga-eduzi gị ma zaa ajụjụ gị.
Asambodo SSL / TSL nke Semalt nwere ike inye gị isi ihe ise na njem ahịa dijitalụ gị. Ha bụ:
Nchedo kachasị elu nke weebụsaịtị gị
Ngosiputa ngwa ngwa nke enwetara ahihia na Google Chrome na ihe nchọgharị intaneti ndị ọzọ
Nchedo nzuzo maka ndị na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị
Olu dị elu nke ndị ọbịa weebụ sitere na ngwa nchọta
Dị ka ọtụtụ ndị ahịa anyị gara aga na ndị dị ugbu a kwuru, ịwụnye asambodo SSL nwere ike inyere gị aka ịtụgharị weebụsaịtị gị ka ọ bụrụ ọnụ ụzọ nzuzo nke ndị ọrụ gị nwere ike ịtụkwasị obi ma soro ha na-emekọrịta ihe mgbe niile.
Ekwela ka ndị ahịa nwere ike hapụ webụsaịtị gị mgbe ị lechara akara 'adịghị nchebe' na Google Chrome. Weta ha na akwukwo Semalt SSL taa. Pịa ebe a iji zụta otu ugbu a.